izingxenye zesango lensimbi
Ukuba namasango wensimbi kungavimba ngempumelelo ukuhlaselwa kwamanye amazwe. Imikhiqizo yethu ayikuletheli kuphela ukuphepha, kepha futhi yenza impilo yakho ibe nemibala futhi ijabule nsuku zonke.
Umklamo wokuhlobisa wensimbi eyenziwe
Kuklamo wokuhlobisa wensimbi elukiwe, kuyadingeka ukuthi ubheke inhloso yento, imvelo ethile yokusetshenziswa, isitayela sokuhlobisa imvelo, umbala wento, njll. Ngasikhathi sinye, ukusebenza kokusebenza nesisindo yensimbi ebunjiwe kufanele ibe yimbi ...
Amasango wensimbi ajwayelekile ajwayelekile
Amasango wensimbi ajwayelekile ajwayelekile ngokuvamile anamaphethini anzima, amaphrofayili aminyene, futhi ngokuvamile amukela imibala yasendulo. Phakathi kwabo, ubuciko obudala besitayela saseYurophu buyinkimbinkimbi kakhulu, futhi amaphethini asentekenteke ngokwengeziwe, ngokunethezeka nenhle. Iphrofayili yensimbi yanamuhla ...